Kugara uchitarisa pa: Hunhu, Kuvimbika, Sevhisi.
Vacheche & Vacheche Mapfekero
Zvepasi rose Zvinyorwa
Chitubu Jacket Jira
Sarudzo yakanaka kune ako echinyakare ejasi jeketi kuunganidzwa - yakajeka, yakajeka inoratidzira nylon jira. Zvinozoita kuti iwe ubude pakati pevanhu.
Kune mangani marudzi ehembe dzakasarudzika dziripo?
Mbatya dzekuzorora dzinogona kuve dzakakamurwa kuva avant-garde kutandara, kutandara kwemitambo, kudakadza kudanana, bhizinesi zororo uye yekuzorora yekumaruwa. 1.Avant garde zvekupfeka: Avant-garde zvekupfeka, inozivikanwawo semafashoni zvekupfeka, ndiyo inonyanya kufarirwa nevakawanda re ...
Nzira yekusarudza jira rekupfeka kwekunze?
Kune akawanda marudzi emicheka yehembe dzekunze. Ndeipi iyo inonyanya kukodzera iwe? Mukusarudzwa kwemachira ekunze, kune matanhatu anokosha mabasa. Ngatitarisei pazvinhu zvitanhatu: Kukwira kwemhepo Iyo nhanho yemhepo pa ...
Yedu mhando system
Isu tanga tichikunda nehunhu uye mhando uye takakunda kuzivikanwa kwemaindasitiri. Mubhizimusi rekutengesa kunze, tinoda kudzora mhando zvakanyanya. Tariro yekuunza zvigadzirwa zvemhando yepamusoro kune vashandisi pasi rese. Kudzora kwemhando yepamusoro / rutsigiro rwehunyanzvi ...
Sarudza Yako 2020 Yekutora kuunganidzwa
Kudonha kuri kuuya kare, iwe unofanirwa kuronga yako yekudonha mbatya dzekunze. Kune akasiyana siyana iwe aunofanira kufunga nezvayo: iwo mahwendefa egasi, anosvetuka, jasi remvura, zviputi zvemhepo, majaketi emvere etc. Kusarudza hwaro hwepasi, unofanirwa kusarudza jira rekuita, suc ...
Mapatani kugadzira OEM / ODM Kugona: Tinogona kuburitsa yakasarudzika zvipfeko sekuenderana neyako dhizaini / sampuli kana sketch kana zano kubva kwauri. Yedu ruzivo modhi kugadzira matanda ichakupa mhinduro kwauri. Vashandi vedu vane unyanzvi uye QC chikwata WI ...
QC / technical Rutsigiro: Yedu QC timu inoitisa yakasimba tarisiro uye kuongorora kubva kune yakasvibirira zvinhu kune hombe zvigadzirwa. - Mucheka unozodairwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, senge huremu hwejira, kuumbwa, kodhi yemavara, kukasira kwemavara etc.
Kutengesa Mbiri Tinopira mukupa yakazara sevhisi uye yepamusoro mhando zvigadzirwa. Isu takanangana nekugutsikana kwemutengi uye izvo zvinodiwa nemusika. Yedu yebhizinesi tsika iri kutarisa pa: mhando, sevhisi uye kutendeseka. Hatisi chete kutengesa chigadzirwa chedu ...
Tine zvaunogona chero zuva, chero nguva…
Iva wakasununguka kutitumira email kana kufona isu
Runhare: +86 133 6389 0803
Isu tinoshandira makirabhu emitambo, masangano, makoreji, zvitoro, nzvimbo dzekutenga, sangano rehurumende, mubatanidzwa uye vanhu vamwe nevamwe
Kutora maOEM & ODM maodha kubva kumarudzi ese emhando. Isu hatisi kungopa chete dhizaini & yekugadzira sevhisi asiwo bhizinesi kubvunza sevhisi.